Fayilii - Namoota maaskii godhatanii baabura keessa taa'an, Finfinnee, Adoolessa 23, 2020
Itiyoophiyaa keessatti vaayrasiin Koroonaa kan bifa jijjirratee fi Deltaa Veeriyaant jedhamu midhaa geesisaa kan jiru ta'u ministeera Fayyaatti, De'etaa Ministeeraa kan ta'n Dr. Darajjee Dhugumaa Raadiyoo Sagalee Amerikaaf ibsanii jiru.
Namoota irra heedduun isaanii Finfinnee keessaa ta'anii fi dhukkubsatan 100 keessa harkii 80n Vaayrasii Deltaan kan qabaman ta'u ibsamee jira.
Namoota Vaayrasii Deltaan qabamanuun isaanii baramee kan walii galaa keessaa harkii 75 Finfinnee keessa jiraatu.
Vaayrasiin Deltaa akka salphaatti kan daddabruu fi akkaan namoota kan dhukkubsachiisu waan ta'eef meeshaa afuura baafachuuf nama gargaaruu fi hospitaala seenanii kutaa wal'ansii wal irraa hin cinneetti gargaaramuu qabu jedhan.
Hawaasnii of-eeggannoo barbaachisu gochuu dhiisuun akkasumas sababaa ayyaanaa, Cidha, Bo'iichaa fi kanneen biroon uummanni walitti qabamuun, dhukkubicha hammeessuu keessatti qooda akka qaban ibsamee jira.
Kanaaf jecha yeroo kamiin iyyu caalaa of-eeggannoon akka barbaachisu Dr. Darajjee Dhugumaa hubachiisanii jiru.